Raw Amp Citrate (71776-70-0) vatengesi HPLC≥98% | AASraw
MUTSVENE unobatanidzwa uye unyanzvi hwekugadzira kubva ku gram kusvika mukurongeka kweAmp Citrate (71776-70-0), pasi pemutemo weCGMP uye nehutsika hwehutano hwekutonga.
Sezvambotaurwa pamusoro apa AMP citrate ihama yepedyo yeDMAA kana 1,3-dimethylamylamine. Hukama hwepedyo pakati pemakomponi maviri aya hunogona kuratidzwa zvakanaka nekuti AMP citrate (methylpetanamine) uye DMAA (AKA methylhexanamine) inogovana chimiro chimwe chete, asi DMAA ine kabhoni yakawedzera mumabhonzo ayo…
Molecular Kurema: 137.7
Makemikari Mazita: Amp Citrate
Mumakore mashomanana adarika, AMP Citrate yava chinhu chinozivikanwa pakugadzirira kushanda uye kudimburira kugadzirira. Kubva pane zvesayenzi zvemaonero, inozivikanwa semethylpentanamine, 4-amino-2-methylpentane citrate kana 1,3-dimethylbutylamine (DMBA), asi inowanzonzi "itsva" DMAA. Izvi zvinoratidzika kubva pane zvakafanana-zvakarambidzwa - zvakarambidzwa uye zvinokurudzira, zvose zviri maererano nemakemikari akaumbwa uye zvinoitika.
AMP Citrate iyi inokurudzira simba yenheyo. Hazviitike zvakasikwa mumatambo makuru, asi zvinowanikwa mudiki muPuchong Tea, asi inofungidzirwa kuti vazhinji veCITrate ye AMP inoshandiswa mune zvekuwedzera zvinogadzirwa zvakagadzirwa.
Nemhaka yekufananidzwa kwayo kune DMAA kushandiswa kwayo uye kubatsirwa muwedzerwa kune zvimwe zvakafanana. PP Citrate inokanganisa hutachiona hwehutano hwakafanana ne caffeine asi inowanikwa zvakasimba. Paunenge uchishandisa usati watanga kudzidza iwe uchaona:
-Kuwedzerwa kwemasimba (kunyanya kana ichibatanidza nekaseine)
-Iye yakagadziriswa metabolism
-Kuwedzera mune zvemitambo
Kusiyana nekukwirira kwakanyanya kwe caffeine, AMP Citrate inowanzobatanidzwa nekuwedzera kusunungurwa kwesimba nechinguva chiduku.
AMP Citrate supplements vave vachifarira zvakanaka sezvimwe zvezvigadzirwa zvakatengesa zvakanyanya mumusika.
Izvo zvizere zvinowedzera zvine AMP Citrate:
-BPM Labs Mumwe 2.0
-Kutora Mitambo Frenzy
Ndeipi muyero weAmp Citrate
Nemhaka yekushayikwa kwekliniki muedzo we AMP, zvakaoma kuziva chirongwa chinokurudzirwa. Zvisinei, zvinotarisirwa kuti dose inenge iri yakakwirira kudarika DMAA inofanotaura nezvayo nezve 100 kusvika 350 mg. Nguva yekuita zvakanaka ndeyema 4-6 maawa.
Inonyanya kubudirira kuitira kuwedzerwa simba panguva yekugadzirira. Zvakanakisisa kutora chikamu pamusoro pemaminitsi e30 vasati vadzidziswa. Kuti uwedzere mararamiro ako uye kurasikirwa kwemafuta, iwe unofanirwa kuitora mangwanani kana kuti usati watanga kudya.
AMP mabasa synergistically ne caffeine, uye nekuda kwekuti iwe unogona kuwana kazhinji zvinhu zviviri mubasa rekushanda. Muchiitiko chekushandisa "solo" panofanira kuwedzerwa 200-300 mg ye caffeine kuitira kuti zviwedzere kubatsirwa.
Tanga nehotera shoma kuti uongorore kushivirira kwako, uye uwedzere kuderedza kubva ipapo.
Iko Amp Citrate inoshanda sei
AMP citrate mabasa, munyanzvi, kuburikidza nemitsetse yakafanana neDMAA, asi kwete sechimbichimbi. Izvi zvinoita kuti uve neurological stimulant, sezvo inoshanda nekusunungura neurotransmitter ine simba norepinephrine, kuwedzera kune dopamine. Kuwedzera kwemaawa aya mahomoni maviri kunogona kuwedzera huwandu hwedu hwekucherechedza, kuisa pfungwa, simba, kukurudzira, uye kuchenjerera mupfungwa.
Iko PIT Citrate zviri pamutemo here?
Sezvazvino, hongu. AMP Citrate haisi mushonga wepamutemo. Izvozvi, zvisinei, kuongororwa neDFA mushure memajeri mazhinji pamusoro pemigumisiro yaro yakatumirwa zviri pamutemo. Nokudaro, nepo AMP Citrate yakabvumirwa kuti vanhu vashandiswe, makambani akawanda akaibudisa kubva pamashalofu kuti vaone kuti havazove chinangwa cheDAA mune ramangwana.
AMP Citrate ichiripo, asi FDA inoita seyokuvhara zvakakurumidza. Inowanikwa pasi pemazita ose akanyorwa pamusoro apa, uye zvichida akawanda, naizvozvo inofanira kunge iri nguva zvisati zvaitika zvose zvaunenge wasarudza zvaenda. Asi cherechedza kuti makambani anoshandisa mazita ekushandura mazano ekutenderera mitemo yeDAA haisi makambani akatendeseka kutarisana nawo.
Ko Amp Citrate Inobatsira Here?
Pamusana pekufananidzwa kwayo neDMAA, migumisiro yechirwere ye AMP citrate yakafanana zvakafanana. Maitiro akakwirira anogona kukonzera kushushikana, kukurumidza kwemoyo, uye zviratidzo zvakabatana. Vashandi ve AMP citrate vaudzawo kuti zvinogona kukonzera DMAA-like crash mushure mokunge migumisiro yapera.
Nemhaka yokuti AMP citrate inguvo itsva, pane zvidzidzo zvishomanana zvakanyanya pamusoro pechikamu maererano nekubudirira uye kuchengeteka. Sezvo zvakadaro, zvinokurudzira vese vashandisi ve AMP citrate kuti vashandise, vasati vadye zvakanyanya kudarika zvinorayirwa, uye kuti vasashandise pamwe chete newaini, kana kuti zvinhu zvakasiyana zvakasiyana kana zvokudya zvinokurudzira. Kana iwe uri pamishonga kana uchitambura nehutano, unokurudzirwa kuti usarega kushandisa michina ine chinhu ichi.
Nzira yekutenga Amp Citrate kubva kuAASraw